होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / 'बिहेमा ड्रामा गर्ने सोच छैन'
'बिहेमा ड्रामा गर्ने सोच छैन'	04 Jul 2013 | 10:34am बिहीबार २० असार, २०७०
सामीप्य तिमल्सेना	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
काठमाडौं - बुधबार मध्यान्ह अभिनेता राजेश हमाल कुपण्डोलस्थित उत्तम क्रिएसनमा शरीरको नाप दिँदै गरेका भेटिए। कालो हाफ सर्ट र निलो जिन्समा इसिमोड प्रिन्टेड क्यापका साथ उपस्थित राजेश ड्रेस डिजाइनर उत्तम बनेपालीले भनेझैं कहिले हात त कहिले खुट्टा फैलाएर नाप दिइरहेका थिए। केही दिनमै फ्लोरमा जाने फिल्म 'हँसिया'को ड्रेस डिजाइनका लागि त्यहाँ उपस्थित राजेश हालका दिनमा बिहे गर्ने खबरका कारण चर्चामा छन्। नागरिकले उनीसँग बिहेबाटै कुराकानी थाल्यो।अब चाहिँ तपाईंको बिहे खान पाइन्छ?कुनै भवितव्य भएन भने पाइन्छ।कहिलेसम्म?हेर्नुस् म त वर्षबाट महिनामा झरिसकेको छु। अब यही महिना भन्न चाहिँ गाह्रो छ।तर माघमा हो भन्ने हल्ला छ?एकदमै टुङ्गो भएको त होइन। परिवार सबै मिलेर निर्णय गर्ने हो। तर समस्या के छ भने कसैको कुन महिनामा बिदा मिल्छ, कसैको कुन महिना। छलफलको क्रममा छौं। तर त्यो भन्दा पर लैजाने मनसाय छैन।अनि मुक्तिनाथमा हुने र तपाईंको बिहे?खोइ मुक्तिनाथको हल्ला कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन। मैले त्यहाँ गर्छु भनेको पनि छैन।तर निर्माता राजेन्द्र ठकुरीले त तयारी गर्न थालिसक्नु भयो रे?मैले पनि त्यो हल्ला सुनेको हुँ। हाँसो पनि लाग्यो। तर कुनै सत्य होइन। राजेन्द्रजी मेरो मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले म सहयोग गर्न तयार छु भन्नु भएको हो। तर एकदमै फाइनल भएको होइन।भनेपछि हुनसक्ने सम्भावना पनि छ?मैले भनेँ नि, परिवारले बसेर निर्णय गर्न बाँकी नै छ। तर मेरो भित्री इच्छा के हो भने जिन्दगीमा फिल्मभित्र बहुतै ड्रामा गरियो। बिहेमा त्यस्तो ड्रामा गर्ने सोच छैन। म एकान्तप्रेमी मान्छे हुँ। बिहे पनि होहल्ला नगरी तडकभडक बिना गर्न चाहन्छु। मेरो इच्छा मिल्ने गरी मुक्तिनाथ, रारा वा अन्य कुनै ठाउँमा पनि हुनसक्छ। बिहेपछि केही स्पेशल योजना छन् कि?बिहेको डिटेलमा धेरै नजाउँ। केही भयो भने तपाईंहरुलाई थाहा भई नै हाल्छ।सामाजिक काम र उद्घाटन कार्यक्रममा रिबन काट्दै हिँड्न थाल्नुभएको छ। फिल्मबाट फुर्सद पाउनु भएको हो? अलि अलि पाएको र अलिअलि लिएको पनि हुँ। अब पहिलेझैं जस्तो पायो त्यस्तो फिल्म पनि गर्ने पक्षमा छैन। छानेर गर्छु। तर राजेश हमालले फिल्म पाउन छोड्यो भन्ने हल्ला छ नि?हल्ला गर्नेले के के गर्छन्, मलाई थाहा छैन। तर मैले यही 'हँसिया' फिल्म गर्नलाई पाँचवटा फिल्म छाडिदिएँ।भनेपछि 'हँसिया'मा तपाईंको खास भूमिका देख्न पाइन्छ?एकदमै एक्स्ट्रा भन्ने पनि होइन। तर प्रस्तुतिमा नयाँपन हुनेछ भन्ने। अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामा छु। निर्देशकले कपाल काट्नुपर्छ भन्नु भएको छ। काट्दैछु। तपाईं निर्देशकको 'डार्लिङ एक्टर' हो है, निर्देशकले जे भन्यो त्यो मान्दिने?मलाई अरुको काममा दख्खल दिन मन लाग्दैन। निर्देशकको आफ्नै सोचाइ हुन्छ, भिजन हुन्छ। उसले फिल्मको बारेमा हामी सबैले भन्दा ज्यादा सोचेको हुन्छ। त्यसैले कति कुरा गलत जस्तो लागे पनि म शंकाको सुविधा दिन्छु।त्यही भएर तपाईंलाई आजभोलि आरोप पनि छ नि, तपाईंको कारणले फिल्म उद्योग यो अवस्थामा आयो?हो र, कसरी?तपाईंले जहिलै पनि संख्यालाई महŒव दिनुभो, फिल्मको गुणस्तरलाई होइन। तपाईंले चाहेको भए फिल्मको दिशा अर्कै हुनसक्थ्यो?यो पक्षपाती विश्लेषण हो। विगतलाई तपाईंले वर्तमानको कसीमा राखेर हेर्नुभयो भने सबै गल्ती भेट्नुहुन्छ। तर त्यही बेलाकै समयमा रहेर विश्लेषण गर्नुभयो भने अर्कै सत्य देखा पर्छ। हिजोका दिनमा जतिबेला म फिल्ममा आएँ, त्यतिबेला फिल्म बन्न नै जरुरी थियो। संख्या महत्वपूर्ण थियो। बल्ल उद्योगको एउटा खाका तयार भइरहेको छ। आज जसले पुराना फिल्मकर्मीमाथि दोष थोपरिरहनुभएको छ, उहाँहरु राम्रा फिल्म बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यसको श्रेय पुरानालाई पनि जान्छ। पूराना फिल्मकर्मीहरु त नयाँ धार भनाउँदाले फिल्म उद्योग बिगारे भन्छन्। तपाईं कसको पक्षमा?म नेपाली फिल्मको पक्षमा। मलाई त यो धार–सार भन्ने कुरामा विश्वास छैन। फिल्म भनेको दर्शकका लागि बनाउने हो र त्यो फिल्म हेरेर दर्शकले दुई–तीन घन्टाका लागि आफूलाई बिर्सनुपर्यो। मेरा लागि त फिल्म राम्रा नराम्रा छुट्टयाउने दुइटा मात्र आधार छन्। दर्शकले रुचाएका फिल्म राम्रा र नरुचाएका नराम्रा।तपाईं पनि चाँडै निर्देशनमा आउने सोचमा हुनुहुन्छ, कस्तो फिल्मलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ?मनोरञ्जन दिने जस्तोसुकै फिल्म हुनसक्छ। तर प्रेमकथा र सामाजिक मुद्दामा ज्यादा रुचि रहनेछ।कहिलेबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ?चाँडै नै गर्छु। माहोल ठिक भएको भए आजभोलि नै पनि सुरु गर्ने सोच थियो। तर अहिले वातावरण ठिक नभएकाले रोकिएको छु।तपाईं त राजनीतिमा जान पनि इच्छुक हुनुहुन्छ होइन?अवश्य छु। तर तत्कालै होइन। मेरो पहिलो प्राथमिकता त फिल्म नै हो। अनुकुल वातावरण बन्यो भने राजनीतिमा पनि सहभागी हुन सक्छु।पछि भनेको बिहेपछि नै त होइन?निश्चय नै होइन। बिहे गर्नेबित्तिकै मेरो जीवनको धारनै परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन। मेरो जे नियमित काम छ, त्यसैमा निरन्तर रहनेछु। « दियाको बेजोड प्रस्तुती (भिडियो)
३१ औंमा बल्ल रिलिज! »